စေရာ…….် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » စေရာ…….်	4
Posted by Mr. Pocket on Oct 2, 2015 in Arts & Humanities, Creative Writing, Poetry |4comments
ငါ့မျက်ရည်ကျတဲ့အခါ … အပိုတွေလို့နင်ပြောတဲ့အခါတိုင်း
ကမန်းတမ်းနဲ့ ကျပြီးသားမျက်ရည်တွေ ပြန်ကောက်သိမ်းရတာ အမော….
ငါဟာနင်ပေးတဲ့ပျော်စရာတွေကို အားပါးတရ သုံးဆောင်ဖို့ပြင်တဲ့အချိန်တိုင်း….
နင်ပသတဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်းအာဟာရတွေကိုသာ ဖြည့်တင်းခဲ့ရတာပါ……
ငါဟာ ဥပေက္ခာပြုခံထားရတဲ့ စာခြောက်ရုပ်..
ငါဟာ အထီးကျန်ခြင်းမုဆိုးရဲ့ ၀မ်းစာဖြေဖို့အတွက် သားကောင်…
ငါဟာ ဥပေက္ခာပြုတတ်သူတို့ရဲ့ အခမ်းအနားနဲ့
ငါဟာ အသက်ကို၀၀ရှုတဲ့ သက်မဲ့တစ်ကောင်…
ငါဟာ နှလုံးသားကို လျိုသပ် ကြိုးပေါင်းများစွာသွပ်သွင်းလို့..
နင့်ပါးစပ်အလှုပ်မှာ ကွေးနေအောင် ကရတဲ့…
ဖေဇော်ဂျီ အရုပ်လေးတစ်ရုပ်…….။ ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: တင်စားချက်လေး ကောင်းထာ။
ဇော်ဂျီ လှလှလေး ပုံလေး နဲ့ တွဲတင်ရင် ပိုမိုက်မယ်ထင်~~
Mr. Pocket says: ဟုတ်ကဲ့ဗျ … အကြံပေးတာကိုကျေးဇူးဗျ…
Mike says: .မစ္စတာပေါ့ကက် ရဲ့ကဗျာလေးတွေမှာ အားငယ်မှုလေးတွေပြည့်နေသဗျ
Alinsett @ Maung Thura says: .ဇော်က ကရင်…မောနေလျက်နဲ့တောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟန်…ဆောင်ရသဗျာ….